ပထမဦးဆုံး နှင့်တစ်ခုတည်းသော မြန်မာဘာသာဖြင့် free online courses များကို သင်ကြားပေးသော videos များကိုစနစ်တကျ စုစည်းတင်ပြထားသည့် online education portal တစ်ခုဖြစ်သည်။
PN IT Center မှဆရာပြည့်စုံဝင်းရဲ့ Free Sharing ပြုလုပ်ပေးထားသော Facebook Marketing ဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Myanmar BOCတွင်သင်ခန်းစာများကို Enrollပြုလုပ်၍ စတင်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
EASY ENGLISH – အခြေခံ English Grammar လေ့လာခြင်းမှ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Myanmar BOCတွင် သင်ခန်းစာကို Enrollပြုလုပ်၍ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် Reviewများလည်း ပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ
Customer Service သင်ခန်းစာကို MESI Online Universityမှ သင်ကြားထားတာဖြစ်ပြီး သင်ခန်းစာများကို အခုပဲ Myanmar BOCမှာ လေ့လာလိုက်ပါ။
စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာသင်ခန်းစာကို MESI Online Universityမှာ သင်ကြားထားသောသင်ခန်းစာများကို အ်ခုပဲ Myanmar BOCမှာ လေ့လာလိုက်ပါ။
တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာမျှဝေမှု (Personal Development)
တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာမျှဝေမှု (Personal Development) ကို ဆရာ ပြည်ခိုင်မှ မျှဝေထားသော Videoများကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Laravel Inertia ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် MyanmarBOC မှ စနစ်တစ်ကျ တင်ပြထားချင်သာဖြစ်ပါသည်။ #FullStack DEV
HTML Beginner သင်ခန်းစာကို Myanmar BOCမှာ Enrollပြုလုပ်ပြီးလေ့လာသင်ယူပါ…
MicroSoft Word လက်တွေ့သင်ခန်းစာကို Myanmar BOCမှာ Enrollပြုလုပ်ပြီးစတင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (Enrollပြလုပ်ထားခြင်းမရှိပါက Previewပြလုပ်ထားသောသင်ခန်းစာများသာလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
December 2, 2019 /3Comments
Japanစာ N5 level ကို Learningလုပ်နေတဲ့ Myanmar Studentများအတွက် လေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းထားပါတယ်ဗျာ Japanese N5 level Learning ကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Like Us Our Facebook- Myanmar Web Store Relatede Japanese Language Course- Daily Uses English
English-Myanmar စကားပြော -ဦးတိုးကြည်
ဦးတိုးကြည်သင်ကြားသော Myanmar to English စကားပြောများကို အခုပဲစသင်သင်ကြားနိုင်ပါပြီ Let’s start Myanmar to English Speaking right now. Myanmar to Englishသင်ခန်းစာများကို English အခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်းMyanmar to English ကိုလွယ်ကူစွာပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ Myanmar to English သင်ခန်းစာတခုမပိုင်သေးပဲ Myanmar to english နောက်သင်ခန်းစားတခုကို မကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Related Course DailyUseEnglish Like Us Our facebook- Myanmar Web Store
နေ့စဉ်သုံး English စကားပြောများ
Daily Usage English Vocabulary in Myanmar Daily Usage English Vocabulary နှငျ့ ပတျသကျပွီး Application ကို အောကျပါ link တှငျ download ရယူနိုငျပါတယျ။ Click To Get Application နေ့စဉ်သုံး English Speaking သင့်၏နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ English Speakingသင်ကို အခမဲ့ Enroll ပြုလုပ်ပြီးလေ့လာလိုက်ပါဗျာ Related Course 1. ADVANCED ENGLISH VOCABULARY 2. ENGLISH LANGUAGE သငျခနျးစာနှငျ့ ပတျသကျပွီး Update ရနိုငျရနျအတှကျ Myanmar BOC facebook page ကို like လုပျဖို့…
WordPress Tutorial Myanmar WordPress ကိုအသုံးပြု၍ ကိုယ်ပိုင် free Domain ကိုယ်ပိုင် Free Hosting များဖြင့် Website တစ်ခုဖြစ်လာသည်ထိ သင်ကြားပေးထားပါသည် ဒီသင်ခန်းစာတွင် WordPress ကို ကိုယ့်ရဲ local Computer ထည့်မှာဘယ်လို Setup လုပ်မှာလဲ? ပြီတော့ WordPress အခြေခံအသုံးပြုနည်း ( ကိုယ်ပိုင်Free D0mainName, Free Hosting, Theme Installation, Plugin Installation, Them editing, Menu Creation and editing, word press widget etc..) စသည်တို့ကို Tutorial Video များဖြင့် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။ WordPress ကို အခုမှ လေ့လာသူများအတွက်…
Microsoft Word သင်ခန်းစာ
Microsoft Word Tutorial Myanmar Microsoft Word Tutorial ကို Myanmar ဘာသာဖွငျ့ အခမဲ့ လလေ့ာနိုငျရနျ MyanmarBOC မှ အကောငျးဆုံး training video မြားကို စုစညျးတငျပွထားပါသညျ။ What is Microsoft Word – https://www.youtube.com/watch?v=nqM1LUnsa_E Related Course 1. Microsoft Excel 2. PowerPoint
MikroTik RouterSO Online Training (Myanmar)
October 15, 2019 /3Comments
Mikro Tik RouterSO Online Training Myanmar What is MikroTik RouterOS? MikroTik RouterOS is the operating system of MikroTik RouterBOARD hardware. It can also be installed onaPC and will turn it intoarouter with all the necessary features – routing, firewall, bandwidth management, wireless access point, backhaul link, hotspot gateway, VPN server and…
PHP OOP Basic ကိုလေ့လာသူများအတွက်။ Object Oriented Concepts Before we go in detail, lets define important terms related to Object Oriented Programming. Class − This isaprogrammer-defined data type, which includes local functions as well as local data. You can think ofaclass asatemplate for making many instances of the same kind…
Teacher Green Hackers Programming Channel
Green Hackers Programming Channel